0 Saturday May 23, 2020 - 17:35:51
Deegaanka Kuunya barrow oo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa looga ciiday si wanaagsan, iyadoona boqollaal kamid ah dadka deegaanka ay isugu soo baxeen fagaaraha Sayid Muxamad Cabdulle Xassan.
0 Saturday May 23, 2020 - 14:00:49
Degmada Saakow ee wilaayada Jubooyinka iyo degaanada hoos yimaada waxaa maanta looga ciiday si aad u heer sarreysa iyadoo dad weynuhu ay ku dukadeen fagaarayaal waaweyn islamarkaana muujiyeen shacaa'irta islaamka.
0 Monday April 13, 2020 - 19:40:02
Fagaare kuyaal degmada Jamaame ee gobolka Jubbada hoose ayaa lagusoo bandhigay meydadka ciidamo katirsanaa maamulka Axmed Madoobe oo lagu dilay dagaal dhowaan ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo.
0 Saturday April 11, 2020 - 13:21:07
Allaah ha u naxariisto waxaa la aasay Suldaankii beesha Jareerweyne ee gobalada Jubbooyinka kaasi oo shalay duqeyn ay ku dileen diyaaradaha Drone-ka ee dowladda Mareykanka.
0 Thursday April 09, 2020 - 12:34:34
Diyaaradaha duuliye la'aanta (Drone) ee dowladda Mareykanka ayaa Labo maalin ka hor waxay duqeyn arxan daro ah ka geysteen degmada Jilib ee xarunta gobolka Jubbada dhexe.
0 Tuesday March 31, 2020 - 09:21:34
Faah faahin dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka habeen ka hor ka geysteen deegaan katirsan gobolka Bay ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Friday March 06, 2020 - 19:12:47
Xaflad oo aheyd mid si heer sare ah loosoo agaasimay ayaa lagu Caleemasaarayay Suldaan Cali Cismaan Roorow Suldaanka beesha Sheekhaal ee jubbooyinka waxayna ka dhacday magaalada Jilib ee Jubbada dhexe.
0 Wednesday January 29, 2020 - 12:29:07
Ehellada nin shacab ah oo diyaaradaha Mareykanka ay maalin ka hor ku dileen deegaan katirsan gobolka Jubbada dhexe ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay qaabkii ay duqeyntaasi udhacday.
0 Monday January 13, 2020 - 13:38:41
Deegaanka Kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha Hoose waxaa laga dareemayaa horumar aad u ballaaran oo dhan weliba leh, waxaana kamid ah dhanka ganacsiga, iyadoo ay magaaladu ku tallaabsaneyso isbedel muuqda.
0 Monday January 06, 2020 - 16:35:26
0 Monday December 30, 2019 - 16:21:11
Diyaaradaha dagaalka dowladda Mareykanka ayaa markale duqeymo indha la'aan ah ka geystay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
0 Saturday December 28, 2019 - 08:58:32
Ciidamada Uganda ee heysta degaanka Danow oo hoos taga degmada Qoryooley ayaa habeenkii xalay madaafiicda goobta ku duqeeyay tuulada Waagaadi oo hoos tagta degmada Jannaale ee gobolka Shabeelaha Hoose.
0 Thursday December 26, 2019 - 19:26:15
Beeralayda gobolka Bakool ayaa dagaal ba'an kula jira cayayaanka Ayaxa oo markii ugu horraysay gaaray deegaanno katirsan gobollada dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Thursday December 26, 2019 - 19:23:15
Maktabka Zakawaadka wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa degmooyinka iyo deegaannada wilaayadu ka talisa ka qeybiyay Xoolaha Zakawaatka sanadda 1441.
0 Thursday December 26, 2019 - 12:46:44
Safar shaqo oo dhawaan idaacadda Andalus ay ku tagtay degmada Bu'aale ee wilaayada Jubbooyinka ayaa intii la socotay wararkeena waxad ku dhagaysateen warbixinno shan ah oo laga baahiyay idaacadda Andalus kuwaasi oo diiradda lagu saaray horumarka ka jira magaalada Bu'aale ee dhanka dhismaha magaalada,…
0 Visits: 28235 | Friday November 08, 2019 - 14:49:45
Mu'asasada Alkataa'ib garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa soo saartay Muuqaal la daawan karo in ka badan 50 daqiiqo kaas oo lagu faaqidayo duullaankii barakeysnaa ee lagu qaaday xerada ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Soomaaliya dabayaaqadii bishii Sept ee la soo…